musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Nyowani Expat Visa Sarudzo Inogona Kuwedzera GCC Tourism
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Kupa vashandi vekune dzimwe nyika, vanokodzera, nemavhiza ekugara kuti vagare kupfuura hupenyu hwavo hwekushanda uye sumo dzedzimwe sarudzo itsva dzemavhiza zvichave zvakakosha pakushanya uye kupa simba kune zvinokwezva, zviitiko uye nzvimbo dzevaraidzo. Ichi chichava chimwe chemisoro yakatariswa kuArabian Travel Market (ATM), 2022, inoitika muna Chivabvu 8-11.
ARIVAL Dubai @ ATM kutarisa kune itsva expat visa sarudzo, iyo inogona kupa kukurudzira kwezviitiko zvedunhu, zvinokwezva, zviitiko, uye nzvimbo dzevaraidzo.
Kushanyira mhuri uye shamwari dzevakasiya basa kuchabatsira kupfavisa nhongonya uye zvimwiro zvenguva dzakakwirira uye dzakaderera dzekufamba.
Gulf aviation sector kuti iwane pundutso pamusika wepasi rose unokosha madhora mazana maviri nemakumi mashanu nemana emadhora.
ARIVAL Dubai @ ATM inosimudzira kusikwa kwe-mu-kuenda zviitiko nekupa ruzivo uye nharaunda yevagadziri uye vatengesi vekushanya, zviitiko uye zvinokwezva. Inoongorora maitiro azvino uye eramangwana uye inotarisa mukukura kwebhizinesi kuburikidza nekushambadzira, tekinoroji, kugovera, hutungamiriri hwekufunga, uye hukama hwepamusoro.
Zvinofungidzirwa kuti parizvino kune vanopfuura mamirioni makumi matatu neshanu vashandi vekune dzimwe nyika munyika dzeGCC uye panogona kunge paine chikamu chakakura chevanhu vachena, vangangoda kuenda pamudyandigere muGCC, kunyangwe ingangove kwenguva pfupi. .
“Nenzira nenguva zviri mumaoko avo, zvingangove zvemuzvarirwo, kwete chete kune vakasiya basa ava kufamba, asiwo kugamuchira mhuri neshamwari. Ndege, mahotera, nzvimbo dzekufambisa nedzimwe nzvimbo dzevaraidzo, vese vanobatsirikana nekuwedzera mari iyi ingadai yakarasika, dai vakasiya basa vadzokera kunyika dzavo,” akadaro. Danielle Curtis, Mutungamiriri weChiratidziro ME, Arabhu Rwokufamba Musika.
"Pamusoro pezvo, haisi tsaona kuti misika mbiri dzepamusoro dzekuDubai muna 2019, India ine vashanyi mamirioni maviri neUK, ine vashanyi miriyoni 1.2 vane nharaunda muUAE, 2.6 miriyoni uye 120,000 zvakateerana," akawedzera.
Kuona izvi zvinogona kuitika, Dubai Tourism nekubatana neGeneral Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA-Dubai), yakatotangisa chirongwa chinonzi "Retire in Dubai," yekutanga yerudzi rwayo mudunhu, hurongwa hunoshanda hune humwe hushoma. zvinodiwa zvemari, umo vagari veDubai vava kusvika zera rekurega basa, vanogona kunyorera vhiza inodzokororwa, yemakore mashanu ekurega basa.
“Kana danho iri rikabudirira, zvinokwanisika kuti dzimwe nyika dzeGCC dzitevere pane imwe nguva. Vari pamudyandigere pasina mubvunzo vaizobatsira zvakanyanya mubazi rezvekushanyirwa kwenyika, kugamuchira hama neshamwari uye kuramba vachirarama hupenyu hwemhando yepamusoro hwavajaira,” akawedzera Curtis.
Inokosha $254 bhiriyoni pasi rose muna 2019, iyo yekushanya, zviitiko, uye zvinokwezva chikamu chekufamba uye kushanya hachisi chikamu chechitatu-pakukura chekufamba; ndosaka vanhu vakawanda vachifamba pekutanga. Kupa zvakadaro zvinokonzeresa zvingave zviitiko uye zvinokwezva, senge Expo 2020, FIFA World Cup 2022 muQatar, Ain Dubai, pamwe nekuuya kuri kuuya kushanya muSaudi Arabia uye runako rwechisikigo rweOman.
Iye zvino mugore rayo rechimakumi maviri nepfumbamwe uye kushanda pamwe chete neDubai World Trade Center (DWTC) neDhipatimendi reDhipatimendi reKushanya neCommerce Marketing (DTCM) reDubai, chiitiko ichi, kuratidzira kukuru muna 29 kuchasanganisira, pakati pezvimwe, misangano yekuenda yakanangana nemisika mikuru. Saudi, Russia, China neIndia.
Kufamba Mberi, chiitiko chinotungamira chepasirese chetekinoroji yekufamba chinoisa chitarisiko pane ichangoburwa, inotevera chizvarwa tekinoroji yekufamba uye kugamuchira vaeni, maforamu evatengi veATM uye zviitiko zvekumhanyisa network.
ATM 2022 ichaitawo misangano yakatsaurirwa yemusangano paGlobal Stage, inovhara ndege, mahotera, kushanya kwemitambo, kushanya kwezvitoro uye seminari yekugamuchira vaenzi. Sangano reGlobal Business Travel Association (GBTA), iro rinotungamira bhizinesi repasi rose uye rinosangana nesangano rekutengeserana, richange richitora chikamu paATM. Iyo GBTA ichaunza yazvino bhizinesi yekufamba zvemukati, tsvagiridzo uye dzidzo kutyaira kudzoreredza uye nekutsigira kukura mukufamba kwebhizinesi. Uye nekubatana ne "Arival the in-thestination voice," ATM ichaita musangano wehafu yezuva musi waMay 8 kana Zuva 1 reATM.
ATM ichaita basa rakakosha muArabian Travel Week, mutambo wezviitiko zvakatsaurirwa kune nyanzvi dzekufambisa kubva kumativi ese enyika, kushandirapamwe uye kugadzirisa kudzoreredza kweindasitiri yekufambisa yeMiddle East, kuburikidza nekuratidzira, makonferensi, mapfupi emangwanani, mibairo, kutangwa kwechigadzirwa uye. networking zviitiko.
Kutevera 2021, ATM Virtual zvichazoitika zvakare mukati meArabia Yekufamba Vhiki kuzadzisa iyo mhenyu ATM show. Nehurongwa hwakakura, hwepamusoro-soro hwewebhunari uye hurongwa hwakazara hwemisangano yevhidhiyo inowanikwa kune varatidziri vane vatengi vakakosha pasirese.
Nezve Arabian Travel Market (ATM)
Arabian Travel Market (ATM), ikozvino pagore rayo rechimakumi maviri nepfumbamwe, ndiyo inotungamira, yepasirese yekufamba uye yekushanya chiitiko muMiddle East yevanopinda uye vanobuda kunze kwevashandi vekushanya. ATM 29 yakaratidza makambani anopfuura chiuru nemazana matatu ekuratidzira kubva kunyika makumi matanhatu nembiri mumahoro mapfumbamwe kuDubai World Trade Center, nevashanyi vanobva kunyika dzinopfuura zana nemakumi mana mumazuva mana. Arabian Travel Market chikamu cheArabian Travel Week. #MazanoAsvikaKuno
eTurboNews mubatsiri wenhau weATM.